Malunga nathi - Hebei Moyo Technologies Co., Ltd.
ISICWANGCISO Umgangatho ubekwe kwindawo yoPhuhliso lwezoQoqosho kunye neTekhnoloji, kwiPhondo lase-Hebei, China, e-Beijing-Tianjin-Hebei kwisangqa sophuhliso loqoqosho, kufutshane neBeijing-Guangzhou Expressway, iTianjin Port, kunye neShijiazhuang Airport. Indawo ekuyo ibalasele kwaye ukuthuthwa kulunge kakhulu.
Inkampani iphumeza ukudityaniswa kwamashishini kunye norhwebo, kwaye ivelisa i-SPC flooring ukusukela ngo-2014. Idibanisa uphuhliso, uphando, imveliso kunye nentengiso ye-SPC flooring. Umzi-mveliso ugubungela ummandla we-70,000 yeemitha zesikwere, kunye ne-3 ezenzekelayo ngokupheleleyo kwimigca yokuvelisa yamanye amazwe, enexabiso lonyaka lokuvelisa i-3.24 yezigidi zeemitha zesikwere. Iimveliso zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-40 eMpuma Yurophu, eUnited States, kuMbindi Mpuma, eMzantsi Melika, nakuMzantsi-mpuma Asia.
Ngokomgangatho wemveliso, inkampani ine-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, isatifikethi sehlathi seFSC, uhlolo lweqela lesithathu lomxholo we-formaldehyde kunye nolunye uqinisekiso. Iitalente zenkampani ephezulu-zobugcisa zilawula ngokungqongqo ubudlelwane ukusuka kwimveliso ekrwada ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo, kunye nokufezekisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu njengokukhokela, Ukuphumeza iqhinga lophawu lwentengiso.
Inkampani ibambelela kumgaqo "wokubambelela kulawulo lodidi lokuqala, ukuvelisa iimveliso ezikumgangatho wokuqala, kunye nokubonelela ngeenkonzo zodidi lokuqala", ukubambelela kwindlela yokufunda, uphuhliso kunye nokuyila, ukuhambisana neendlela zeshishini lasekhaya nakwamanye amazwe, zihlala Gcina isantya kuphuhliso lwetekhnoloji yamanye amazwe, ngokuqhubekayo uphucula umgangatho wemveliso, kunye nokuhlaziya iikhonsepthi zoyilo. Ukuphucula inkqubo yenkonzo, zama ukugqibelela kunye nokugqibelela.
Inkampani ijolise kuphuhliso lwamatye e-plastiki yelitye lase China, ngombono ojonge phambili, umbono wehlabathi, kunye nomgaqo wabathengi kuqala, ukukhuthaza ukuphuhliswa kweshishini le-China, kunye negalelo lalo ekuvuseleleni ilizwe lase China iimveliso zeshishini.
Ukusukela nge2020, ngenxa ye-COVID-19, ukulungiselela ukubanceda abathengi kunye nokuxhamla kuphuhliso lwabo lweshishini, sinokucebisa abavelisi bemboleko bemveliso ezinxulumene noko kubathengi.
1. Umenzi we-skirting
2. Abavelisi bebhodi ye-PVC
3.Umzi-mveliso wocingo olubiyele
4, IVinyl yokusika umatshini weFektri
Kwangelo xesha, ukuze sitshatise izinto ezilula nezisindayo, sikwacebisa amaphephadonga e-3D ekhitshini kubathengi, kuba umgangatho unzima kakhulu, oya kuthi ubangele inkunkuma enkulu yendawo kwisitya. Ukuba inokuhanjiswa ngephepha lodonga le-3D, inokusebenzisa ngokufanelekileyo indawo yesikhongozeli kwaye igcine iindleko.
Wamkele abathengi abavela kuwo onke amazwe ehlabathini ukuba bathethathethane ngamashishini. Siza kusebenzisa esona simo sengqondo sisebenza ngokusondeleyo, esisebenzayo nesengqiqweni ukunceda abathengi bandise kwaye baphuhlise ishishini labo ukuqinisekisa ukwandiswa kweenzuzo zabathengi.